Soomaaliya waxa ay soo martay dagaallo badan ilaa maantana qeybo kamid ah dalka waxaa ka dhaca dagaallo ay dad badan ku dhintaan. Dib-u-heshiisiin dhab ah iyo is cafin ma dhicin. Is-aaminaadda bulshadana waa mid hooseysa. Dowlad-dhiska Soomaaliyana weli waa mid curdun ah. Maxkamadaha ayaa ku yaalla magaalooyinka iyadoo dadka oo dhan aanay dacwadahooda geysan. Odayaasha dhaqanka ayaa qeyb weyn ka qaata xallinta khilaafyada.
Marka dowlad burburtay dib loo dhisayo, mid kamid ah siyaabaha xal loogu helo dhibaatooyinkii dhacay waxaa loo yaqaannaa Cadaaladda Xilliga Kala Guurka oo afka Ingiriirka lagu yiraahdo Transitional Justice. Podcast-gan waxa ay Dr Axmed Cali Khayre iyo Mahad Waasuge ku falanqeynayaan cadaaladda xilliga kala guurka iyo sida colaadihii dhacay loo bogsiin karo.